Ifama yeLavender yaseO'Sea
Ifama sinombuki zindwendwe onguJennifer
Ifakwe elunxwemeni lobuhle baseNorthumberland Strait eqhayisa ngolwandle oluphefumlayo kunye nemibono yokwalusa, ushiywe ungenandlela yokuphumla kwaye ubuxabise ubomi. Le yeyona ndawo iphezulu yeholide kwabo bafuna ukuphumla kunye nokukhulula. Ilungele abo bamkela indlela yokuphila yangaphandle. Ifumaneka unyaka wonke, ixesha elifutshane kunye nexesha elide lihlala lamkelekile.
Indlu yam entle yeendwendwe yabucala ibiza wena okanye iqela lakho ukuya kuthi ga kwi-10 ukuba undwendwele kwaye ubaleke kubomi obuxakekileyo. Relax kwigumbi lelanga kwaye ungene kwindawo entle, kunye nembono ephefumlayo yendalo yasendle, intsimi, ulwandle kunye nemithi. Kwabo bafuna i-adventure, kunye nabathandi bendalo, le yindawo yakho. Zive ukhululekile ukuhamba okanye ukunyuka ipropathi kwaye uqubhe kulwandle olungaphaya kwesitrato. Yiza nemoto yakho yekhephu kwaye ukhwele umzila wengingqi odlula kwiyadi yangasemva. Ehlotyeni yiza nephenyane lakho okanye ijet ski, enokuthi iqaliswe ngokufanelekileyo kwindawo ekufutshane apho kukho ukuqaliswa kwesikhephe.
Ndikwindawo encinci yasemaphandleni engaselwandle yaseSt-Thomas de Kent, malunga nemizuzu engama-40 ukusuka eMoncton. Kwimizuzu engama-20 yokuqhuba uya kuba nakho ukutyelela iilwandle, iivenkile zokutyela, iimarike zasefama, iivenkile zalapha ekhaya, iipaki zephondo, iindlela zebhayisekile yeentaba, igalufa kunye neminye imisebenzi emininzi.
Le yifama esebenzayo. Amaxesha ngamaxesha baya kuba ngabasebenzi kwipropati benza umsebenzi we-landscape kwintsimi ye-lavender. Ndihlala kwindawo esecaleni kwendlu yeendwendwe ecaleni kwendlu enkulu. Ndisoloko ndifumaneka ukuba kuyimfuneko. Iindwendwe zamkelekile ukuba zijonge indawo
Le yifama esebenzayo. Amaxesha ngamaxesha baya kuba ngabasebenzi kwipropati benza umsebenzi we-landscape kwintsimi ye-lavender. Ndihlala kwindawo esecaleni kwendlu yeendwendwe ecal…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Thomas-de-Kent